Maamulka Isbitalka Boosaaso oo ka deyriyay Xaalada wariye Xasan Anteeno. – SBC
Maamulka Isbitalka Boosaaso oo ka deyriyay Xaalada wariye Xasan Anteeno.
Maamulka Isbitaalka Magaalada Boosaaso ayaa sheegay in aan Wariye Xasan Maxamed Cali Anteeno oo maanta lagu dhaawacay magaalada Boosaaso waxba looga qaban karin gudaha isbitaalka.
Wariy Xasan Maxamed Cali (Anteeno ) oo ka shaqeynayey idaacadda Codka Nabadda ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa dhaawac halis ah uu kasoo gaaray rasaastii ay ku dhufteen kooxii bastoolada ku hubeysan oo waxyeeleeyey xili uu Wariyuhu fadhiyey goob shaaha laga cabo oo ku dhow xarunta Idaacadaasi.
Maxamed Axmed Xuseen (timo jilic ) oo ah maamulaha isbitaalka ayaa shirka saxaafadeed uu qabtay galabta wax uu ku sheegay in uu wariye Xasan uu ubaahan yahay in loo qaado dalka dibadiisa si halkaa loogu soo dabiibo madaama ay xabadu kaga taal meel halisa sida uu sheegay, waxaanu intasi ku daray in ay ku dadaaleen intii ay dadaali karaan isla markaana ay halis gali karto naftiisa hadii uu ka daaho dabiibka dibada loogu qaadayo .
Sidoo kale maamulka Idaacada codka nabada Boosaaso ayaa iyaguna wada qoreshe dibada loogu qaado wariye Xasan Maxamed Cali Anteeno oo hada ku jira isbitaalka magaalada Boosaaso.
Axmed Maxamed Axmed (Nuune)
ilaahay waxaan kabaryayaa inuu caafimaadiyo wariye anteeno
War meesha iskaga taga waxaan aaminsanahay in Mogadishu ay ka nabad fiican tahay Puntland dhan la sheegayo , meel nabad ah ma jirto kuwii Konfurta ka soo cararay ayaa lagu qarinaya oo laga jecel yahay. Dadka Boosaaso waxaad dhisee saan gurya iska dhaafa hada waxii ka dambeeyo waa la idin dhameen sababtoo ah idinkaa jeclaaday balaayada inaad qarisaan ileen wa aragteen reer Gaalkacyo tuugii la qaban rabo waxaa la leeyahay qabiilkeena ayaa duulaan lagu yahay. War yaa ugu futa xun u dhaafa ha dhameeyaan ayagaa shaqees tay in saas loo galo qurun kasta guri ku qarinaayo markuu umada soo toogto ayaa waxaa la leeyahay waa rag rag dhalay. Dadka fiican iska taga oo ka musaafara meeshan waa u dhamaatay.
ad bn uga xumhy dhawca sxbky anteeno ilahy wxn uga brysyah in u alle u sahlo
WAAN KA XUMAHAY WARIYAHAA LA DHAAWACAY